Iyo iPhone 7 ichasvika muColombia muna Gumiguru 21 | IPhone nhau
Iyo iPhone 7 ichasvika muColombia muna Gumiguru 21
Nguva pfupi usati wapedza kiyi yekuratidzwa kweiyo nyowani iPhone 7 uye 7 Plus, Apple yakaratidza runyorwa rwenyika idzo chigadzirwa chitsva chaizowanikwa mune yekutanga batch, runyorwa rwenyika idzo nyika idzo dzaigara dzichitambira terminal mune yechipiri. batch yakasanganiswa, chimwe chinhu icho vakomana veCupertino vasina kunge vajaira. Dambudziko rinowanzoitika, kushomeka kwemasheya, yakadzokororwa asi panguva ino nenzira yakasimbiswa zvakanyanya Nekuti iyo terminal yaiwanikwa mune dzimwe nyika zhinji, izvo zvakamanikidza vakomana kuFoxconn kutanga kugadzira chigadzirwa kunge sekunge pasina mangwana.
Asi iwo matsva iPhone 7 uye 7 Plus mamodheru haasati awanikwa pasirese, asi kuchine huwandu hwenyika zhinji kwavachakamirira nemaoko akazaruka, zvisinei nemutengo wavachazosvika kumisika iyoyo. Vaverengi vedu muColombia vachakwanisa kunakidzwa neiyi terminal kubva muna Gumiguru anotevera, musi uyo unenge watove kuwanikwa mune zvakajairwa vatengesi. Zuva iro rinosvikawo muSouth Korea, nyika yekumba kweSamsung, uye zuva risati rasvika kuEjipitori.
Asi kwete chete iyo iPhone 7 uye 7 Plus inosvika, asi Iyo nyowani Apple Watch Series 1 uye 2 mamodheru anouyawo. Kuvhurwa zviri pamutemo kweiyo iPhone 7 uye 7 Plus kwakaitika munaGunyana 16 uye zvakangotora zvinopfuura mwedzi kuti zviwanikwe munyika zhinji uko kambani inotengesa zvigadzirwa zvayo, kungave zvakananga kana kuburikidza nevechitatu mapato. Zvinotaridza kuti vakomana vanobva kuCupertino vaisa mabhatiri ekupa zvigadzirwa zvavo zvitsva munyika zhinji pamwechete, poindi inofarirwa naApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo iPhone 7 ichasvika muColombia muna Gumiguru 21
Apple inotangisa yechina beta yeIOS 10.1
Apple inosiya chirongwa cheTitan uye zano rekugadzira mota